Dislocker, oo ah aalad lagu helo marinnada loo qoondeeyey ee ay qortay Bitlocker oo ka socota Linux | Laga soo bilaabo Linux
Tikniyoolajiyadda sirta ee Microsoft ee Windows Bitlocker, waa farsamo weyn taas oo, marka loo isticmaalo qayb ahaan ilaalin karta macluumaadka ku yaal. Laakiin mid ka mid ah dhibaatooyinka waaweyn ee haysta ayaa ah inay u oggolaato oo keliya helitaanka macluumaadka Windows, iyadoo laga tagayo adeegsiga suurtagalka ah ee qeybta loo adeegsado nidaamyada aan ka aheyn Windows.
Taasi waa sababta si aan u jajabino oo aan u soo saarno tirada BitLocker ee Linux waxaan isticmaali doonaa aalad loo yaqaan "Dislocker" taas oo noo ogolaan doonta inaan ku aqrino BitLocker qeybaha encryption ee Linux iyo macOS. Dislocker wuxuu aqriyey / qorey taageerada BitLocker qeeybinta sirta ah ee Windows 10, 8.1, 8, 7 iyo Vista (AES-CBC, AES-XTS, 128 ama 256 jajab, leh ama aan laheyn maroodiga faafiyaha). Waxa kale oo ay taageertaa BitLocker-To-Go oo la isku duubay (qaybo / qaybo USB / FAT32) ah.
1 Ku rakibida Dislocker-ka Linux
1.1 Iskudub Dislocker
Ku rakibida Dislocker-ka Linux
Sida oo kale qalabka aan horay loo rakibin qaybinta kasta ka yimid Linux, laakiin hadday ku dhex jirto keydadka qaybinta badankood Linux. Marka haddii rakibidu ay tahay wax fudud.
Qaybinta sida Debian, Ubuntu ama qaybinta kale oo ku saleysan kuwan, rakibidda dQalabka waxaa laga samayn karaa terminalka adoo ku qoraya amarka soo socda:
Xaalada kuwa ah Arch Linux, Manjaro, Arco Linux ama isticmaale kasta oo kale qaybinta iyada oo ku saleysan Arch Linux, rakibidda waxaa laga sameeyaa bakhaarka AUR. Sidaa darteed, waa inay lahaadaan kaydinta awood u leh faylkooda pacman.conf iyo saaxir AUR lagu rakibay.
Rakibaadda waxaa lagu fuliyaa amarka:
Hadda kuwa isticmaala Fedora, RHEL, CentOS ama nooc kale oo ka mid ah kuwan, terminaalka kaliya waxay ku qorayaan amarka soo socda:
Hadda oo la rakibay 'Dislocker', waxaan u baahannahay inaan wax ka beddelno. Si aad u bilowdo, waa inaan abuurnaa galka cusub ee wax lagu dhejinayo halkaas oo qaybta Bitlocker laga heli karo marka hawsha dejinta la dhammeeyo.
Ka dib markii la abuuro galka "ka kooban" galka warbaahinta, galka kale waa in la sameeyaa.
Marka labada faylba ku jiraan diiwaanka warbaahinta, waad hubin kartaa haddii faylku ay yaalliin halkii laga rabay inay ahaadaan adoo u wareegaya galka CD ama ka soo gala maamulaha faylkaaga.
Hadda waxaa la joogaa waqtigii loo isticmaali lahaa Dislocker si loo jajabiyo loona jaro qaybinta Bitlocker ka yimid Linux.
Si tan loo sameeyo, waxa ugu horreeya ee ay tahay inaan sameyno waa ordo amarka lsblk si aad u hesho calaamadda qaybta Windows kaas oo lagu kaydiyay Bitlocker.
Taasi kiiskeyga waxay noqon doontaa / dev / sdb1, laakiin si kasta oo ay tahay waa lagu kala duwanaan karaa, taasi waa sababta ay muhiim u tahay in la aqoonsado kala qaybsanaanta.
Horay ayaa loo gartay, hadda waxaan u isticmaali doonaa dislocker, decrypt xijaab. Tan awgeed waxaan ku qori doonnaa amarka soo socda oo dhigaya calaamadda qaybta iyo sidoo kale inaan dhigno waddada galka aan ku abuurnay magaca "bitlocker" horey.
Aqui Waxaa nala weydiin doonaa lambarka sirta ah ee loo adeegsado in lagu adeegsado isticmaale Windows. Waan ku qornaa oo riix gal.
Adoo adeegsanaya amarka kala-bixiyaha, hadda waxaa la joogaa waqtigii lagu dhejin lahaa qaybta Bitlocker ee ku jirta / warbaahinta / faylka galka.
Waa muhiim inaad tixgeliso taas Dislocker wuxuu si otomaatig ah ufuujinayaa qaybtaada qeybta "aqrinta-kaliya" iyo si loo xaliyo dhibaatada, kaliya ku socod chkdsk cutubka.
Tan, waxaan ku heli karnaa waxyaabaha ku jira qaybta lagu qariyey Bitlocker oo ka socota Linux oo aan awood u yeelan karno inaan la shaqeyno faylasha ku dhex jira.
Finalmente si aad uga furto qaybta Bitlocker ee Linux, kaliya socodsii amarka umount ku saabsan galka. Waxaa muhiim ah in la xuso in dukumiinti kasta ama feyl kasta oo aan ku ogahay qeybtaan ay tahay in la xiro.
Si aad uga degtid qaybta kaliya riix:
Haddii ay dhacdo in qaybta aan la kala dirin, waxaan ku qasbi karnaa kala-soocida adoo qoraya amarka soo socda:
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » Dislocker, oo ah qalab lagu helo marinnada loo qoondeeyo ee ay qortay Bitlocker kana socota Linux
Waxaan rabaa in aan kuu sheego in aan gaadhay ikhtiyaarka codsanaya erayga sirta ah ee isticmaalaha, laakiin qalad ayaan helayaa
khalad, ma heli karo datum sax ah oo u dhigma iska soo ridid.
midkoodna macnaheedu waa jajabinta furayaasha. iska soo ridid.
Aad baad ugu mahadsantahay buugan, aad buu ii anfacay !!
Waxaan haystaa pendrive oo leh Bitlocker waana awooday inaan ku hagaajiyo Linux ka dib talaabooyinkaaga laakiin ma dhigi karo inaan wax ka beddelo. Waxay igu xardhaysaa "akhri kaliya" mana awoodo inaan wax ka beddelo. Ma i caawin kartaa? Mahadsanid !!
Ku jawaab Rafalin
Way ila shaqaysaa aniga Linux Mint iyo Ubuntu, laakiin markaan rabo inaan u isticmaalo Debian, taas oo ah distro aan rabo inaan isticmaalo, ma aqoonsana lambarka sirta ah. Waxaad ubaahantahay ku tiirsanaan kale.
Aynu Encrypt ku dhawaaqno qorshe oggolaansho shahaado cusub